Soo Iibso Daawada finanka oo ku raaxeyso Maqaar nadiif ah waligaa kadib! Ilaa 50% Off!
Waa maxay finanka?
finanka waa cillad maqaarka caadi ah oo bixisa culeys maskaxeed oo aad u weyn. Xanuunada finanka ku dhaca iyo kuwa ku dhaca xaalad ay dhakhaatiirta maqaarku ugu yeeraan KERATOSIS KA-CELISTA, waxay leeyihiin qanjirro firfircoon oo firfircoon oo sababa maqaarka inay ku xirmaan unugyada dhintay dusha sare taasna waxay keenaysaa in bakteeriyadu taranto.
Unugyada maqaarka ee dhinta waxaa si joogto ah looga daadiyaa epidermis-ka. Mararka qaarkood, iyo gaar ahaan maqaarka saliida leh, unugyadan looma kala baxo oo sidaas ayey ku dhismi karaan, ugu dambeyntiina waxay dib ugu noqdaan meelaha ay ka furan yihiin daloolada, taasna waxay keentay in godka uu xirmo.
Hawo nadiif ah kuma soo degi karto qafiska si ay u keento oksijiin sunta dila. Cawaaqibku waa godad xiran oo leh jawi diiran oo qoyan. Tani waa meesha ugu fiican ee taranka bakteeriyada. Markuu bakteeriyadu soo uruuriso oo ay tarmaan, waxay ku bararaan follicle, bararkuna wuu dhacaa. Labada madax iyo madax madow labaduba waxay ku bilowdaan "microcomedone". Kuwani waxay noqonayaan madax cad ama mad madow ama ugu dambayntii goob barakaysan.
Waxay la xiriirtaa arrimaha cudurada keena ee loo baahan yahay in wax laga qabto si loo sameeyo qorshe daaweyn loogu talagalay cilladda. Waxaad daweyn doontaa caabuq, faafitaanka, sicir bararka, iyo P acnes. Waxay kuxirantahay sida daran ee xaalada nooca daaweynta aad ubaahantahay. Xaaladaha qaarkood, antibiyootig la mariyo ama qaabeysan ayaa loo baahan yahay in la isticmaalo iyo haddii ay lagama maarmaan tahay benzoyl peroxide si loo yareeyo soo bixitaanka caabbinta.
In kasta oo ay adag tahay in lala macaamilo, waxaa muhiim ah in la ogaado inaadan kali aheyn. Daaweynta finanka waxay u muuqan kartaa mayl fog, laakiin safar kasta wuxuu leeyahay bilowgiisa. Waa la fahmi karaa in dulqaadku uu si adag u adag yahay marka dhibaatooyinkaaga lagu qoro wejigaaga oo dhan. Si kastaba ha noqotee, caajis iyo waqti-qaadasho sida ay noqon karto, maqaarkaagu wuxuu arki doonaa maalmihiisa ugu fiican haddii aad ku adkeysato dariiqaaga midab cad.
Yuu ku dhacaa finanku?
Dadka jinsi kasta iyo da 'kastaba ha ahaatee waxay ku dhacdaa xaaladdan maqaarka ah ee dhibta leh. Waxay ku badan tahay dhalinyarada iyo dhalinyarada. Qiyaastii boqolkiiba 80 dhammaan dadka da'doodu u dhaxayso 11 iyo 30 waxay mar uun ku dhacaan finanku.
Dadka badankood, waxay u egtahay inay baxayaan markay gaadhaan soddon jir; si kastaba ha noqotee, dadka qaar ee afartameeyadii iyo kontonaadkii wali waxay ku hayaan dhibaatadan maqaarka.
Xaaladda maqaarkaani waxay ku timaadaa qaabab kala duwan waxaana sida caadiga ah lagu gartaa cabirkiisa iyo darnaantiisa, waxayna ku dhacdaa dadka da ’kasta ha lahaadeene. Badanaa, qaababka daran waxay ka soo baxaan qaabab fudud; halka kuwa kalena ay u horumari karaan si madaxbanaan.
Foomamka marka timaha (daloolka) maqaarka ku yaal ay ku xirmaan soo saarid saaid ah (saliid dabiici ah oo maqaarku soo saaro), unugyada dhintay oo ay ku dhacdo bakteeriya. Tani waxay u horseedaa caabuq (barar, casaan iyo xanuun) barta cudurka.
Bilowgeedu waa nooca ugu yar ee lesion, oo loo yaqaan microcomedo. Waxay kuxirantahay koritaanka microcomedo, waxaa laga yaabaa inuu ku soo baxo comedo furan ama isku xiran comedo.
Kahor intaadan isku dayin inaad finankaaga kaga takhalusto daaweynta finanka kala duwan ee la heli karo, waa inaad ogaataa nooca finanka aad ka hortageyso. Waa kuwan muuqaalka guud ee noocyada kala duwan:
Finanka Vulgaris - kani waa qaabka ugu caansan, kaas oo ka kooban labada mad-madow (furan comedo) iyo madax-cadde (xirmo isku xiran). Noocan finanka ah waa qaabka ugu fudud ee finanka lagu daweeyo
Madax madoobaad - Madax-xanuunku waxay kobcaan marka daloolada ay qayb ahaan ku xirmaan unugyada maqaarka ee dhintay, bakteeriyada iyo sebum. Midabka madow ee finkan ma sababo wasakh, laakiin wuxuu sameysmaa marka midabbada maqaarka ee soo ifbaxay ay ku falceliyaan oksijiinka hawada ku jira. Madax-xanuunku way adkaan karaan in la daweeyo.
Madax-cad - Madax-cadde waa waxyaabaha ka soo baxa daloolada gabi ahaanba xiran. Xuubku wuxuu ka buuxaa bakteeriyada, saliidaha iyo unugyada maqaarka ee dhintay, iskudarkana wuxuu u muuqdaa mid cad oo kaliya maqaarka hoostiisa. Madax-cadaadku way u fududahay in lagu daaweeyo madax-madoobaadka.
Papules - Papules waa daloolada xirmay ee cudurka qaba oo barara. Waxay u muuqdaan sida kuuskuus cas oo dusha maqaarka dushiisa. Finankaas marna waa inaan la tuujin, maxaa yeelay tani waxay ku faafin doontaa infekshinka meelaha ku hareeraysan, waxay hor istaagi doontaa bogsashada waxayna u horseedi doontaa nabarro.
Furuus - Pustules waxay u egyihiin madax cad, marka laga reebo finankaasi oo bararsan, muuqaal ahaan casaan leh iyo xarun cad ama jaalle malax darteed. Badanaa waxa badanaa loo yaqaanno finanka ama shilalka, waxay u muuqdaan inay yihiin finan.
Qalabyada - Xuddunta, ama fiixdu, waa noocyo daran oo finan ah kuwaas oo ay ka buuxaan malax, qaabab u eg kiishka hoostiisa dusha maqaarka. Finanka noocan ah waxay qaadataa waqti dheer in laga takhaluso. Iskudhufta marna waa in aan la tuujin. Tuujiintu waxay ku faafin doontaa infekshinka unugyo kale oo ku wareegsan goobta caabuqa aasaasiga ah waxayna ka dhigeysaa bogsashada mid aad u dhib badan. Xuddunta ayaa ah mid aad u xanuun badan oo nabarradu ay ka sii badan yihiin kana xun yihiin kuwa ay sababaan noocyada kale.
Cystic Acne - Finanka finanka waa nooc ka mid ah noocyada kala goynta badan. Foomka 'cystic form' badanaa wuxuu yimaadaa sababtoo ah isku xoqidda finanka yar yar ee malaxda ka buuxaan. Tani waxay keentaa in malaxdu ay si qoto dheer ugu socoto unugyada maqaarka. Kuus kuuskan maqaarka leh ee bararsan ee maqaarku buuxay way weyn yihiin, xanuun badan yihiin ayna adag tahay in la daweeyo Finanka finanka wuxuu saameyn ku yeelan karaa wajiga iyo aagga kale ee jirka.
Finanka Rosacea - Acne Rosacea, ama si sax ah loogu yaqaan rosacea, waa xaalad maqaarka oo daba dheeraata oo umuuqata finanka cas. Waxay ku dhacdaa inta badan dadka qaangaarka ah ee da'da dhexe leh maqaarka wanaagsan. Finanka ayaa badanaa la socda finanka, oo caadi ahaan ku kooban wejiga, dhabannada, sanka, iyo garka. Sababta rosacea lama yaqaan, laakiin hiddo-wadaha ayaa laga yaabaa inay yihiin qayb wax ku biirinaysa. Rosacea daran, oo aan la daaweynin waxay sababi kartaa dhaawac nabarro.
Finanka Conglobata - Finanka 'Conglobata' waa nooc aad u daran oo ah finanka cystic, guud ahaan wuxuu saameeyaa ragga da'doodu u dhaxeyso 18 ilaa 30 jir. Foomkan waxaa lagu kala soocaa qanjirro qoto dheer oo qotodheer oo maqaarka hoostiisa ku xirma qanjirro kale, oo ay weheliyaan madax badan oo madow. Finankaasi waxay sii socon karaan sanado waxayna keeni karaan nabaro waaweyn, wayna adag tahay in la daweeyo.
Finanka khafiifka ah ayaa badanaa wax ka qabta daaweynta guriga, laakiin haddii aad leedahay qaabab daran waa inaad la tashataa dhakhtarka maqaarka ama xirfadle caafimaad si ay kaaga caawiso inaad go'aan ka gaarto daaweynta ugu fiican noocaaga.
Xaaladda maqaarku waxay burburin kartaa maqaarka quruxda badan iyo kuwa kale ee caafimaadka qaba illaa xad aad u weyn, gaar ahaan markii loo oggolaado inay horumar sameeyaan.
Dhowr finan iyo dhibco ayaa dhici kara isla waqti isku mid ah ama wax yar, iyadoo ku xiran kuwan, xaaladda maqaarka waxaa loo qiimeyn karaa
- Fasalka 1 - taas oo inta badan ku lug leh madax madow
- Fasalka 2 - ku lug leh inta badan madax cad, laakiin madaxyada madow ayaa sidoo kale la socon kara
- Fasalka 3 - malax buuxiyey maqaarka maqaarkiisa fin sida fin
- Fasalka 4 - tan waxaa loo arkaa inay tahay nooc aad u daran oo fin ah oo ku lug leh qanjirada yar yar laakiin xirmooyinka maqaarka ee malaxda ka buuxsamay oo inta badan bararsan oo xanuun leh.
Tan waxaa badanaa lagu arkaa inta lagu jiro qaan-gaarnimada, oo ka muuqda inta badan hareeraha wejiga, iyo mararka qaarkood sanka sidoo kale. Madax cad oo yar ayaa sidoo kale laga yaabaa in lagu xuso agagaarka garka mararka qaarkood. Si kastaba ha noqotee, dadka waaweyni sidoo kale waxay dareemeen horumar lama filaan ah oo ah qaab fudud nolosha dambe.
Calaamadda ugu horreysa ee carqaladeynta maqaarka ee keenta finanka finanka ayaa soo muuqan doonta, sida maqaarka dufanka leh ee u muuqda mid dufan leh, madax furan oo madoow, badiyaa dhowr ka mid ah ayaa isku mar dhaca. Ma jiro barar maqaarka oo badanaa lagu arko marxaladan, in kastoo.
Finanka khafiifka ah ama fasalka 1aad wuxuu kujiraa heer si fudud loo daweeyo. Waxyaabaha miiska laga soo iibsado ee miiska laga iibsado iyo nadaafad wanaag ayaa ku filan in xaaladda la xakameeyo. Waxay u badan tahay inay qaadan doonto muddo hal bil ah si loo ogaado wax kasta oo horumar ah oo xaaladda ah, laakiin markii daaweynta la bilaabo, waxay ka hortageysaa horumarka finanka.
Finanka dhexdhexaadka ah
Sida ay soo jeedinayso, tani waxay waxyar ka noqon doontaa darajo ka sarreysa qaabka fudud ee finanka. Madoobaadka iyo madax-madoobaadka badanaa way sii faafi doonaan halkii ay ku koobnaan lahaayeen hal meel oo yar. Dhibcuhu waxay noqon doonaan cabbir yar oo weyn maxaa yeelay samayska malax, iyo barar khafiif ah ayaa sidoo kale lagu ogaan karaa marxaladan. Haweenka, kala-baxyadu badanaa waxay ku soo beegmaan wareeggooda caadada, ama caadada ka hor ama caadada.
Finanka finanka dhexdhexaadka ah ama heerka 2aad waxay badanaa u baahan doonaan isku darka salicylic acid iyo kareemka benzoyl peroxide si loo dilo bakteeriyada loona tuuro dusha sare ee maqaarka, lakab lakab, si looga takhaluso finanka. Mar labaad nadaafad wanaagsan, sida maydhista aagga si joogto ah si looga saaro dheecaanka xad-dhaafka ah, iyo ka-fogaanshaha soo-noqnoqoshada soo noqnoqda ama isku-riixista comedones dibedda waa in la raacaa.
Awoodda bararka maqaarka iyo tirada dhibcaha ayaa si ballaaran u weynaan doona marka la barbar dhigo fasalka 1 iyo 2, marxaladdan, oo loo arko inay tahay mid aad u daran. Sare u qaadka maqaarka sida fin, sida caadiga ah malax buuxsamay iyo cadho u muuqataa tiro ka badan, oo lagu arki doonaa meelaha kale sidoo kale, sida laabta iyo dhabarka gobollada.
Marxaladdan, maqaarkaaga waa in lagu daaweeyaa si looga hortago inuu ku sii socdo qaab aad u daran ama fasal 4 ah, taas oo badiyaa gaabisa ka jawaab celinta nooc kasta oo daaweyn ah. Iyada oo ay weheliyaan kareemada jirka la mariyo, dawooyinka afka ayaa sidoo kale loo qori doonaa si loo xakameeyo koritaanka. Wakiilada maqaarka ka sifeeya ayaa sidoo kale loo isticmaali doonaa si looga hortago nabarro ay suuragal tahay in looga tago finanka finanka.
Fasalka 4 Finanka
Marxaladdan, kala-baxa ayaa noqon doona mid daran. Waxay isu soo bandhigi doontaa sida fiyuusyo waaweyn, fiirinta qanjidhada, oo leh darajo weyn oo maqaarka maqaarka ah oo la arko.
Oo ay weheliyaan wakiilada jirka iyo kuwa afka, daaweynta iftiinka sidoo kale waa in la raacaa si loo xakameeyo finanka finanka. Tani si kastaba ha noqotee, waxaa loo tixgeliyaa inay tahay nooca finanka finanka, sida caadiga ah marxaladda saddexaad ee horumarka, shakhsiyaadku waxay la xiriiri lahaayeen xirfadlayaal caafimaad si ay uga caawiyaan
Maxaad ula xiriiri kartaa dhakhtarka maqaarka
Dhaqtarka takhasuska leh ee maqaarka - dhakhtarka maqaarka - ayaa ah goobta ugu horeysa ee lagala hadlo marka aad rabto inaad iibsato kiniiniyada finanka. Waa lagama maarmaan in la booqdo dhakhtarkaaga maqaarka si loo ogaado sababta dhibaatada si markaa daawada finanka loo qoro. Si kastaba ha noqotee, waa inaad weli waxoogaa fikrad ah ka haysataa nooca daaweynta finanka la bixiyaa iyo nooca saamaynta ay daaweynta qaarkood yeelan doonaan.
Xaaladda maqaarka waxaa loo kala saari karaa qaab fudud, dhexdhexaad ah iyo mid daran. Nooca halista ah sida finanka cystic wuxuu u baahan yahay hab taxaddar leh oo lagu daweeyo khubarada maqaarka. Dhakhtarka maqaarku wuu yaqaan noocyada daaweynta ee kala duwan waadna dooran kartaa daaweyn kasta oo aad jeceshahay. Xaaladaha qaarkood dhakhtarka maqaarka ayaa sidoo kale ku guuldareysta inuu qoro daawada saxda ah ee looga takhalusi karo xaaladdan maqaarka xun. Caadi ahaan haddii aad macmiil u tahay dhakhtarkaaga maqaarka oo aad ku cusub tahay daaweynta la isku dabaqayo, cuncunka maqaarku waa suurtagal.
Daawada finanka waxay leedahay qaab u gaar ah oo u gaar ah. Qaarkood waxaa lagu abuuray isku-dar ah daawooyin dabiici ah iyo qaar gaar ah oo debecsan oo dejiya maqaarka, kuwa kale ayaa sidoo kale lagu abuuray kiimikooyin badan. Waxaa jira daawada finanka oo qaali ah oo waxtar u leh dadka kale hase yeeshe adiga kuguma shaqeyn doono, taa lidkeed. Fikirka ugu weyn ayaa ah qiimaha kuma xirna doorashada daawada saxda ah.
Maxay tahay inaad ku bilowdo daawada finanka?
Dadka la dhibaataysan dhibaatadan maqaarka waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay isticmaalka daawooyin wax ku ool ah. Xishoodka dhibaatada ka soo gaadhay waa in isla markaaba la joojiyaa. Qofna looma diidin inuu leeyahay finankaas foosha xun. Bilow inaad eegto daaweyn wax ku ool u ah nadiifinta wejigaaga iyo jirkaaga kana hor tagaysa jabitaanka mustaqbalka. Jooji hadda kahor intaysan uga sii darin xaaladdaada maqaarka hadda.
Dawooyinka miiska laga soo iibsado badanaa way fududahay oo kuma jiraan antibiyootiko finanka iyo kiimikooyin kale si looga takhaluso bakteeriyada; halka dawada finanka laguu qoro ay ku siin doonto intaas in yar oo dheeri ah si aad uga saarto noocyada daran ee xaalada maqaarkan.
Qaar ka mid ah daawooyinka finanka la mariyo ee miiska laga iibsado ayaa ah:
Ilaha dabiiciga ah ee salicylic acid waxaa laga heli karaa geedka White Willow waxaana lagu yaqaanay qarniyo si loo yareeyo xanuunka iyo xanuunka oo xitaa loo yareeyo qandhada. Isku-qurxinteeda kiimikada waxay aad ugu egtahay asbiriinka.
Daaweyn ahaan, waxay u keentaa unugyada dusha sare ee maqaarku inay si fudud u daadiyaan, baabi'iyaan bakteeriyada ku jirta daloolka dillaacsan iyo inay yareeyaan cabirka godka si aan infekshanno kale u dhicin. Waxay kaloo caawisaa abuurista unugyo cusub.
FDA waxay ku talineysaa in maqaarka laga ilaaliyo qorraxda iyadoo la isticmaalayo alaabooyinka leh salicylic acid.
Waxaa la ogaadey 1920s inay daaweyn karto finanka, benzoyl peroxide waxaa loo isticmaalaa inuu yahay kareem la mariyey ama jel. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho isku-uruurinta 2.5% si aad u bilowdo, oo aad si tartiib tartiib ah u dhisto isku-darka illaa 5% iyo 10% ka dib marka maqaarku waqti u helo sameynta dulqaad.
Benzoyl Peroxide waxay ku shaqeysaa iyadoo la qalajiyo oo la nadiifiyo daloolada bakteeriyada iyo dardargelinta cusbooneysiinta unugyada.
Resorcinol waa maaddo kiimiko ah oo leh astaamo jeermis iyo jeermis dile. Waxaa badanaa loo isticmaalaa xanuunada maqaarka ee aadka u daran sida cambaarta iyo cudurka psoriasis, qadar yar oo ah 2% ama ka yar isku uruurinta, resorcinol sidoo kale waa daawo finanka waxtar leh.
Hoos waxaa ku yaal liiska dawooyinka finanka dawada ee guud
Nooc ka mid ah dawada finanka ee dawada finanka, Clindamycin ayaa ugu waxtarka badan dhanka aerobic (u baahan oksijiin) iyo anaerobic (uma baahna oksijiin) infekshannada bakteeriyada.
Marka la mariyo maadada, waxay kaa caawin kartaa la dagaalanka finanka waana mid wax ku ool ah marka la wada isticmaalo Benzoyl Peroxide ama Adapalene (retinoid).
Antibiyootig la mid ah penicillin, waxaa ugu wanaagsan in loo isticmaalo sida boomaato, kareem ama jel si loo daaweeyo finanka.
Tetracycline sidoo kale waa nooc ka mid ah antibiyootikada si loola dagaallamo infekshannada bakteeriyada. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo finanka iyo sidoo kale rosacea. Dhibaatooyinka ay keento waxaa ka mid ah ilkaha oo midab doorsooma, waana inaysan qaadan haweenka uurka leh.
Tretinoin (magaca sumadda: Accutane) waa nooca aashitada ee fiitamiin A waxaana caan ku ah dawada finanka 'Retin A. Tretinoin' sidoo kale wuxuu daaweeyaa keratosis pilaris (finanka xun ee maqaarka u eg maqaarka digaaga) waxaana la muujiyey inuu gaabinayo geedi socodka gabowga maqaarka.
Dhibaatooyinka ay keento waxaa ka mid ah cuncun, casaan iyo dareen gubasho. Waa muhiim intaad isticmaaleyso Retin A inaad raacdo talooyinka dhakhtarkaaga maqaarka si taxaddar leh ugana fogaato qorraxda. Maaddaama Tretinoin ay maqaarka maqaarka ku dareyso, wax soo saarista sidoo kale waa in laga fogaadaa.
Faa'iidooyinka Accutane iyo Saamaynta xun
Guud ahaan waa la ogyahay in daroogada Accutane kaliya ay bixiso natiijooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan dadka qaba finanka. Dhinaca kale, waxay kaliya siin doontaa gebi ahaanba waxyeelo xun haddii shakhsiga isticmaalayaa uur leeyahay. Accutane waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay daroogada ugu dambeysa waxaana la siiyaa badanaa marka aysan waxba u muuqan inay u shaqeeyaan finanka. Sidaa darteed dhacdadan waxaan ku baranay inay jiraan xaalado gaar ah oo qofku uusan u qaadanaynin daawooyinka finanka maxaa yeelay waxay sababi karaan falcelinno xun oo faa'iido ma leh, laakiin qofku waa inuu ogaadaa xaqiiqadan oo uusan ku eedeyn daawada gebi ahaanba waana inuu helaa kaniiniyadooda ay ansixiyeen bixiyahooda daryeelka caafimaad kahor inta aysan bilaabin isticmaalkiisa.
Xusuusin muhiim ah: HA u isticmaalin ama ha u qaadan wax daawo ah foomamka daran ee kor ku xusan adigoon marka hore la tashan dhakhtar aqoon leh. Qoraalkan waxaa loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad oo keliya mana aha in loo arko talo caafimaad.
Dadka qaba finanka sidoo kale waxaa ku dhaca niyad jab. Markaad finan yeelato inta lagu jiro koritaankaaga qaangaarnimada, waxay caqabad ku tahay noloshaada bulsheed. Tani waxay kaa dhigi kartaa inaad xanaaq dareento, xitaa heer colaadeed. Waxaa lagugu ogyahay inaad isbedesho niyadda iyo niyadjab. Daaweynta daaweynta waxay kaa caawin kartaa inaad ka gudubto qaar ka mid ah dhibaatooyinkaas. Dhakhtarkaaga ayaa eegi doona xaaladaada wuxuuna kaa caawin karaa inaad ka gudubto dhibaatooyinkaaga badan. Markaad qaadaneysid dawada Isotretinoin oo aad dareento fikrado isdil, waa inaad isla markiiba u sheegtaa dhakhtarkaaga. Daawadani waxay kordhisaa dareenka niyadjabka iyo u janjeerida dadka qaarkood. Waxaa jira diiwaangelin loo xilsaaray hadda si ay ula socoto kuwa isticmaalaya Isotretinion si ay uga caawiyaan ka takhalusidda xaaladdan maqaarka.
Sidoo kale, daaweynta laser-ka ayaa la raaci karaa, taas oo si guul leh u baabi'in doonta qanjidhada 'sebaceous qanjidhada' kuwaas oo sida caadiga ah waxa sababa dhibaatada marka hore.
Nabarrada loo yaqaan 'Acne' looma tixgeliyo inay yihiin dhibaato maqaarka waxyeello u geysta oo dhab ahaantii waa laga tagi karaa haddii shakhsiga uusan u muuqan inuu saameyn ku yeelanayo iyaga. Daaweynta finanka ugu fiican ayaa lagama maarmaan u ah kaliya xaaladaha daran. Halkan guji si aad uga iibsato Roaccutane khadka tooska ah.